Home » Vaovao momba ny fiaramanidina » Lufthansa Group Airlines dia manitatra ny safidy hanovana famandrihana tsy misy sarany
Enga anie 11, 2021
Lufthansa, SWISS, Austrian Airlines, Brussels Airlines ary Eurowings dia manohy manolotra safidy rebooking malefaka.
Famandrihana tsy voafetra noho ny fepetra fanovana tsy azo ovaina
Ny sidina vaovao dia azo alefa amin'ny datin'ny dia hatramin'ny herintaona ho avy
Tsy mila manolo-tena avy hatrany amin'ny daty sy toerana itodiana vaovao
Izay mikasa ny dia mandritra ny herinandro sy volana ho avy dia afaka manoratra sidina miaraka amin'ny Lufthansa Group Airlines tsy misy ahiahy, na eo aza ny areti-mandringana, satria ny Lufthansa, SWISS, Austrian Airlines, Brussels Airlines ary Eurowings dia manohy manolotra safidy azo averina rebooking. Raha te-hamerina ny diany ireo mpandeha dia tsy mila manapa-kevitra avy hatrany akory momba ny daty na toerana haleha vaovao izy ireo.
Hatramin'ny faran'ny volana aogositra, ny saran-dalan'ny rehetra Vondrona Lufthansa Ny seranam-piaramanidina dia azo averina averina raha tsy misy sarany averina. Ity tolotra saran-dalana ity dia manan-kery ho an'ny vaovao sy ny fanovana indray hatramin'ny faran'ny Mey. Ankehitriny dia atolotra indray ny tolotra: ny saran-dalan'ny seranam-piaramanidina rehetra dia mbola azo averina maimaimpoana hatrany araka izay tadiavina hatramin'ny 31 Jolay 2021, raha toa ka natao alohan'io daty io koa ny fanovana. Aorian'izany, azo atao maimaimpoana ny famoahana indray. Ny sidina vao namandrika dia azo alefa ao anatin'ny valin'ny tapakila iray manontolo hatramin'ny herintaona ho avy. Azon'ny mpanjifa atao ihany koa ny manova ny làlan-kalehany araka izay itiavany azy, arakaraka ny fisian'izy ireo, ary, ohatra, manidina avy any Munich mankany New York fa tsy Frankfurt mankany Rio de Janeiro.
Ireo mpandeha izay te-hanemotra ny diany tany am-boalohany nefa mbola tsy afaka manapa-kevitra momba ny daty sy ny toerana vaovao dia azony atao ny manafoana ny famandrihany voalohany nefa tsy manatanteraka daty fitsangatsanganana vaovao. Ny tapakilan'ny mpanjifa dia mijanona ao amin'ny rafitra ho toy ny trosa mandra-pahafahan'izy ireo manapa-kevitra ny hanao famandrihana vaovao ary hanavotra izany. Ny famandrihana vaovao dia tsy maintsy aorian'ny 31 Aogositra 2021. Ny daty fiaingana amin'ity tranga ity dia tsy maintsy amin'ny taona manaraka, amin'ny 31 Jolay 2022.
Ny Lufthansa Group Airlines dia efa nanao izay hahafahan'ny mpanjifany mamerina ny tapakilan'izy ireo tsy misy sarany tamin'ny taona lasa. Ny fanesorana ny saram-panovana indray dia mihatra manerantany amin'ny famandrihana vaovao amin'ny saran-dàlana rehetra amin'ny zotra fohy, salantsalany ary lavitra. Izany dia ahafahan'ny drafitry ny dia lavitra ho an'ny mpanjifa Lufthansa Group Airlines.
Na izany aza, mety hisy ny vidiny fanampiny amin'ny fanovana indray raha, ohatra, ny kilasy famandrihana tany am-boalohany dia tsy misy intsony rehefa mamerina amin'ny daty hafa na amin'ny toeran-kafa.